Ngosi: Ike nke Infographics | Martech Zone
Muhammad Yasin emepeela ihe ngosi di omimi ma omimi banyere ike na atumatu nke okike ihe omuma, nkesa na nkwalite. Anyị ekwuola banyere infographics ọ dịtụ ntakịrị na Martech na ụlọ ọrụ anyị na-emepe ma na -emepụta ozi infographics karịa mgbe ọ bụla ọzọ.
Gịnị mere ha ji ewu ewu? Ihe kpatara ya bu na ihe omuma ihe omuma nwere ihe ha abua mara mma, obere, na-agbari ngwa ngwa. Rịba ama na ekwaghị m ezi? Nke ahụ bụ n'ihi na echeghị m na ebumnuche nke infographics bụ iji zaa ajụjụ a mgbe niile - oge ụfọdụ ọ bụ naanị iji kpalie onye na - agụ ya ileba anya na isiokwu. Site na ebumnuche dị iche iche, infographic bụ ụzọ dị egwu iji kwado ma ọchụchọ na mgbasa ozi mmekọrịta.
Mahammad na-arụ ọrụ maka onye ahịa anyị, HCCMIS, ụlọ ọrụ na-enye njem mkpuchi ahụike nye ụlọ ọrụ… ọbụna nke anyị ebe ọ bụ na anyị na-arụ ọrụ na mba ofesi yana ụlọ.
Tags: ịzụlite infographicsatụmatụ infographicsleverage infographics
Akpọrọ Blog Blog Marketing kacha elu!
Infographics: Nzuzo Social Media
Feb 25, 2012 na 2:22 PM
Daalụ maka okwu ọma, Doug.
Feb 25, 2012 na 3:38 PM
Ọ bụ ihe ngosi dị egwu Muhammad!